Soo dhoweyn nooc cusub oo Addis Ababa loogu sameeyay Safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhiya Itoobiya - Latest News Updates
Soo dhoweyn nooc cusub oo Addis Ababa loogu sameeyay Safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhiya Itoobiya
Safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya Ambassador
Cali Shariif Axmed ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, halkaasi oo loogu sameeyay soo nooc cusub ah kana duwan safiiradii hore.
Safiirka Soomaaliya u qaabilsan dalka Itoobiya ayaa loo galbiyay aqalka looga taliyo dalka Itoobiya, iyadoo ciidamada bambeyda ay u dhigeen roog cas isla markaana u tumeen astaamaha dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, taasi oo inta badan loo sameyn jiray madaxweynayaasha dalalka caalamka ee booqanaya dalkaasi Itoobiya.
Madaxweynaha dowladda Itoobiya haweeneyda lagu magacaabo
Sahle-Work Zewde ayaa kulan la qaadatay safiirka Dowladda Soomaaliya u magacowday dalka Ittoobiya, waxaana madaxweynaha uu ka guddoomay warqadda magacaabista safiirnimo (Accreditation Letter).
Ambassador Cali Shariif Axmed ayaa waxaa kale oo uu guddoonsiiyay madaxweynaha Itoobiya qoraal uu uga siday Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo isla markaana uga tacsiyeeyay geerida ku timid madaxweynihii hore ee dalkaasi Itoobiya.
Dhinaca madaxweynaha Itoobiya ayaa kulankaasi ka sheegay in xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya uu yahay mid sii kordhaya, taasina ay dan ugu jirto shucuubta labada dal degan.